काठमाडौं । कांग्रेस नेतृत्वमा सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व झन्झन् असफल बन्दै गएपछि उनीविरुद्ध कोइराला परिवारबाट डा. शेखर कोइराला मैदानमा आएका छन् । देउवाको नेतृत्व असफल भइसकेको र रामचन्द्र पौडेलले पनि पार्टी सम्हाल्न नसक्ने भन्दै कोइराला मैदानमा आएका हुन् । उनले आगामी १४औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेदवार बन्ने प्रस्ट सन्देश दिँदै देशव्यापी अभियान सुरु गरेका छन् । कांग्रेसले जागरण अभियान चलाइरहेकै बेला उक्त पार्टीभित्र नयाँ तरंग उत्पन्न भएको बताइएको छ ।
महामन्त्री डा. शशांंक कोइराला र सुजाता कोइरालासँगको सल्लाहमै बढीमा डेढ वर्षभित्र सम्पन्न हुने महाधिवेशनका लागि आफू अघि बढेको शेखरले सन्देश दिएका छन् । ‘आफू टपमा पुगौं र केही गरेर देखाऔं भन्ने इच्छा सबैमा हुन्छ । आफ्नो संस्थामा फस्र्ट म्यान बनौं भन्ने इच्छा स्वाभाविक हो,’ शेखरले सभापति बन्ने इच्छा सार्वजनिक रूपमै यसरी प्रकट गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, उनले देउवा सभापति बनेपछि पार्टीको अवस्था र त्यसमा रामचन्द्र पौडेलको भूमिकासमेत समीक्षा हुनुपर्ने भन्दै दुवैजना आगामी नेतृत्वका लागि असफल भइसकेको बताएका छन् । ‘उनीहरू (देउवा र पौडेल) ले लड्दा पार्टी कहाँ पुग्यो, समीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ,’ उनको भनाइ छ ।
यससँगै अब कांग्रेसभित्र देउवा, पौडेलसँगै कोइरालाहरूको तीन धु्रव खडा भएको छ । महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा त्रिपक्षीय गुटको यो राजनीतिले पूर्णाकार ग्रहण गर्दै जाने राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउन थालेका छन् । शेखरको घोषणाबारे शशांक र सुजाताले केही पनि मुख नखोल्नुले पनि उनीहरू मिलेरै वंशीय विरासत जोगाउने कसरतमा रहेको बुझाइ कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताहरूको टिप्पणी छ ।
आफूलाई असफल साबित गर्नेगरी शेखर मैदानमा आएपछि देउवाले सार्वजनिक कार्यक्रममै शेखरविरुद्ध अभियव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, शेखरले पनि हरेक कार्यक्रममार्फत जवाफ फर्काउने गरेपछि दुईबीचको महाधिवेशन केन्द्रीत टसल अहिलेदेखि छताछुल्ल भएको छ । उता, पार्टीभित्र तेस्रो धारको परिचय बनाएको नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको उपगुट कोइरालाहरू खुलेर मैदानमा आएपछि थप कमजोर हुने र छिन्नभिन्न हुन सक्ने बताउन थालिएको छ । सोही कारण पछिल्ला दिनमा पौडेल र सिटौलाबीच निकटता बढ्दै गएको छ । आफ्नो समूहमा रहेकाहरू छिन्नभिन्न हुन सक्ने देखिएपछि देउवासँग आजित बनेका सिटौला पौडेलसँग नजिएका हुन् । कोइरालाहरू सिटौलालाई नेता नमान्ने, सिटौलाले कोइरालालाई नेता नमान्ने स्थितिका कारण पौडेलसँग उनको गठबन्धन नजिकिएको बताइन्छ ।